Qaabka lagu dhammaystiri karo horyaalka Serie A oo la sii ogaaday & Saddex kulan oo la ciyaari doono… – Gool FM
(Rome) 03 Abril 2019. Sida ay warinayso Jariiradda La Repubblica xilli ciyaareedkan horyaalka Serie A ayaa la dhammaystiri karaa, iyadoo saddex kulan la ciyaarayo isbuucii.
Maamulka Serie A waxa ay awoodi karaan in xilli ciyaareedka la dhammaystiro, iyadoo todobaadkii la ciyaarayo saddex kulan sida ay warinayso Jariiradda wararka maalinlaha ah daabacda ee dalka Talyaaniga ka soo baxda oo la yiraahdo La Repubblica.
Xilli ciyaareedkan horyaalka Serie A waxa uu hakad ku jiraa dhowr isbuuc haatan sababtuana waa caabuqa Adduunka ku faafaya ee Coronavirus, welina ma cadda in xilli ciyaareedkan xitaa uu dib u bilaaban doono.
Inkastoo ay jirto hubanti la’aan, haddana Lega Serie A iyo tiro ka mid ah haya’daha kale ee awoodda leh ayaa ka shaqeynaya qaabab ay ku dhammeysan karaan inta ka dhiman xilli ciyaareedkan haddii ay markale billaabaan.
Tan ugu horreysa ee ku lug yeelan doonta in la dhammaystiro ciyaaraha Talyaaniga ayaa ah in lagu ciyaaro garoomada oo albaabadu u laaban yihiin oo aysan jirin wax taageero ah oo soo xaadiri doona, waxaana warbixintu ay sheegaysa in Lega Serie A iyo xiriirka kubada cagta Talyaaniga (FIGC) ay kaliya dooran karaan in la dhammaystiro xilli ciyaareedka.
Ma jiro koox ku guuleysan doonta horyaalka haddii uu sidan ku dhammaado, iyo saddexda kooxood oo u laabanaysa horyaalka Serie B, halka aan la ogeyn sidoo kale labada kooxood ee Serie B ka soo dallacaysa.
Kooxahan hadda gacanta ku haya afarta boos ee ugu sarreysa ayaa ciyaari doona Champions League, kaddibna kooxaha ku jira kaalinta shanaad, lixaad iyo toddobaad waxay ka qayb geli doonaan Europa League.